शारीरिक सुखभो’गमापनि महिलाहरु किन रुन्छन् ? डा. भावना यस्तो भन्छिन् - ramechhapkhabar.com
शारीरिक सुखभो’ग दुई व्यक्तिको बीचको सम्बन्ध गाढा र प्रेम वृद्धि गर्न एक माध्यम हो । यसले सम्बन्धको घनिष्टता बढाउँछ र दुबै साझेदारहरूले खुशी र आनन्द पाउँछन् । तर धेरै महिलाहरु शारीरिक सुखभो’ग पछि खुशी महसुस गर्दैनन्, बरु चिन्तित हुन्छन् ।
इन्टरनेसनल सोसाइटी फर से*क्शु*अ*ल मेडिसिनका अनुसार केही महिलाहरु शारीरिक सुखभो’गपछि धेरै भावनाहरू हुन्छन् जसले उनीहरूलाई शारीरिक सुखभो’गपछि रुन थाल्छन् । यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले शारीरिक सुखभो’गको समयमा रमाईलो गरेनन् । महिला खुशी र पूर्ण शारीरिक सुखभो’ग पछि पनि रुन सक्छन् ।
डा. बर्मी भन्छिन्, ‘जब लामो समयपछि कुनै महिलाले आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक सुखभो’ग राख्छ, पूर्ण उर्जा बाहिर आउँदछ । यसले आँखा हर्षको आँसुले भरिन् सक्छ ।’ शारीरिक सुखभो’गको समयमा अत्यधिक आन्नद मिल्दा पनि महिलाहरु रुने गर्छन । यसलाई पनि सामँन्य रुपमा नै लिने गरिएको छ ।